नेपालमा स्क्रब टाइफसको जोखिम बढ्दो
जिबन रानाभाट, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा ‘स्क्रब टाइफस’ रोग देखिन थालेको छ । कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका स्क्रब टाइफसका बिरामी, अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेको सख्या बढ्न थालेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा समेत फाटफुट्ट स्क्रब टाइफसका बिरामी फेला परेका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण […]
धनुषाको एक औषधि पसलमा बिक्री गर्न राखेको कोरोना खोप भेटियो, दुई जना पक्राउ
जनकपुरधाम । धनुषाको एक निजी औषधि पसलमा बिक्री गर्न राखेको कोरोना विरुद्धको खोप फेला परेको छ । शहीदनगर नगरपालिका–यदुकोहास्थित श्रीराम मेडिकलमा खोप फेला परेको हो । शहीदनगर नगरपालिकाको सुशासन समिति र प्रहरीले गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा भेटेको हो । उक्त औषधि पसलबाट ४ थान भेरोसेल, १ थान जोन्सन एण्ड जोन्सन र १ थान अस्ट्राजेनेकाको खोप […]
पछिल्लो २४ घण्टामा १,५११ जनामा कोरोना पुष्टि, ११ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा १,५११ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ । १५ हजार १ सय ७९ जनामा गरिएको परीक्षण १५११ जना संक्रमित थपिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जानकारी दिएको छ । १,६८९ जना संक्रमित निको भएका छन् । हाल देशभर २५७७२ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
२० करोड डोज खोप सहयोग गर्ने युरोपेली संघको घोषणा
काठमाडौं– युरोपेली संघले न्युन आय भएका राष्ट्रलाई २० करोड डोज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सहयोग गर्ने भएको छ। युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले २० करोड खोप प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको जानकारी दिइन्। युरोपेली संसदको बैठकमा उनले गरिव राष्ट्रहरुलाई थप २० करोड खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताएकी हुन्। खोप सन् २०२२ को मध्यसम्ममा उपलब्ध […]
नेपालमा निपा भाइरसको जोखिम कति ?
जिबन रानाभाट। काटमाठौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निपा भाइरसको सङ्क्रमणप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ । भारतमा निपा भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको तथा नेपालमा पनि निपा भाइरस सार्ने चमेरा पाइने भएकोले नेपालमा समेत जोखिम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै नेपाल भारत खुला सीमाका कारण भारतबाट समेत फैलन सक्ने हुँदा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह […]
पोखरामा विद्यालयहरु असोज १ गतेदेखि खुल्ने
पोखरा । पोखरामा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरु असोज १ गतेदेखि खुल्ने भएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि भौतिक रुपमा विद्यालयका कक्षा सञ्चालन रोकिएका पोखरा महानगर क्षेत्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरु असोज १ गतेदेखि खुल्ने भएका हुन् । संक्रमणको संख्या घटेसँगै पोखरा महानगरपालिका नगर शिक्षा समितको बैठकले यही असोज १ गतेदेखि विद्यालय संचालन गर्ने […]
राम्रो निन्द्रा पार्न सित्तैमा गर्न मिल्ने ५ उपाय
मानिस स्वस्थ्य रहन र ताजापन महशुस गर्न राती मिठो निन्द्रा लाग्न आवश्यक छ । निन्द्रा लागेर मात्र हुदैँन निन्द्रा पर्याप्त हुन पनि आवश्यक छ । तर आजकल मानिसलाई हतपत निन्द्रा पर्दैन । त्यसैले उनिहरु बेडमा पल्टिएपनि निकै बेरसम्म सुत्ने कसरत गर्छन् । त्यसो भए राती सहज रुपमा निदाउन के गर्ने त ? सुत्नुअघि टिभी नहेर्ने […]
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १,७६० जनामा कोरोना पुष्टि, ७ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १,७६० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । भने ७ जनाको मृत्यु भएको छ । १६,८४४ जनामा परीक्षण हुँदा १ हजार ७६० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो । २४ घण्टामा १,२२० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । सोही अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४९५ जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा […]
कारमा साना बालबालिका राखेर हाक्दा ध्यान दिनुपर्ने १२ कुरा
हरेक मानिसको चाहाना हुन्छ, आफ्ना सन्तानलाई आरामदायी सवारी जस्तै कारमा राखेर कतै घुमाउन लैजाने । तर जान अन्जानमा हुने केहि गल्ती कारण मानिसले कारमा साना बालबालिका राखेर चलाउँदा समस्या भोग्नु पर्दछ । यस्तोमा कारमा साना बच्चा राख्दा के के कुरामा ध्यान दिने भन्ने बारे बुझ्न जरुरी छ । – कार कतै रोक्नु परे बच्चा सुरक्षित […]
काठमाडौं । दुईपटकसम्म स्थगित भएको कक्षा १२ को परीक्षा बुधबारबाट शुरू भएको छ । उक्त परिक्षा असोज ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । परीक्षामा ३ लाख ७४ हजार ४ सय १३ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । परिक्षामा सहभागि विद्यार्थीलाई प्रत्येक बेन्चमा एक एक जना गरि राखिएको छ । सरकारले दिएको निर्देशन पालन गरी विद्यार्थी परिक्षा […]